यतिबेला विश्व समुदाय इन्टरनेटमय भएको छ । इन्टरनेटका कारण पूरा विश्व एउटा सानो भिलेज अर्थात् गाउँमा परिणत भएको अवस्था छ । इन्टरनेटकै कारण व्यापार–व्यवसायलगायतका सामाजिक जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा अनगिन्ती परिवर्तन देखा परेका छन् । थरीथरीका अवसर र चुनौती सिर्जना भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा ई–कमर्स अर्थात् अनलाइन मार्केटिङ वा अनलाइन सपिङको बढ्दो प्रयोग इन्टरनेटकै कारण सम्भव भएको हो ।
पुँजीबजारमा घट्ने बढ्ने भइरहन्छ
पछिल्लो समयमा पुँजीबजारमा नेप्से ११ अंकको हाराहारीमा झरिसकेको थियो । १८८१ अंकसम्म पुगेको नेप्से घटेर ११ सयको हाराहारीमा आइपुगेकाले लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारबाट खर्बौं गुमाइसकेको बताउँछन् । त्यसो त सेयर बजारलाई जोखिमको व्यवसाय पनि भन्ने गरिन्छ । सेयर बजारमा जोखिम भए पनि यसले प्रतिफल राम्रो दिने गरेको पनि छ ।
सहकारी संस्थाको सुशासनमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका
छरिएर रहेको स–सानो पुँजी, स्रोत, साधन र कार्यक्षमतालाई एकीकृत गरी उचित ढंगले परिचालन गराई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षमता सुदृढ गर्न गरिने सहकार्य अर्थात् सह+कारी मिलीजुली काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था नै सहकारी संस्था हो । आफ्ना सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी एवं सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गर्दै परस्पर सहकार्य, एकताबद्ध भई समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका वहन गर्ने संस्था नै सहकारी संस्थाको लक्ष्य हो ।
सकारात्मक अभिव्यक्तिको प्रभाव
हाल सेयरमा बजारमा देखिएको सुस्तता र दिनदिनै भइरहेको उताढ चढावले लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमको नैराश्यता छाइरहेको अवस्थामा सकारात्मक अभिव्यक्तिको प्रभाव कति हुँदो रहेछ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । करिब तीन–चार महिनादेखि निरन्तर बजार तल झर्दा लगानीकर्ता निराश हुन पुगेका थिए । लगातार बजार घट्दा आधाभन्दा धेरै सूचीकृत कम्पनीहरूको आईपीओभन्दा तल आइसकेको छ । लगानीकर्ताको उच्च मनोबलमा कमी तथा पटक–पटक आउने विभिन्न सरकारी नीति–नियमका कारण पुँजी बजार निरन्तर घटिरहेको थियो ।
तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी गरिबी घटाउन र बेरोजगारीको समस्या हल गर्न मुलुकमा स्थायी शान्तिको आवश्यकता छ । विगतको लामो समय संकमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन ।
५० खर्बको अर्थतन्त्र : सम्भव या असम्भव ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र ५० खर्ब अमेरिकी डलर (फाइभ ट्रिलियन इकोनोमी) पु¥याउने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनकै बोलीमा लोली मिलाउँदै आफ्नो कार्यकालभित्र नेपालको अर्थतन्त्र ५० खर्बबराबरको पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।
विश्व समृद्धिमा चीनको योगदान
यो वर्षको अक्टोबर १ मा चीनले जन गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० औं वर्षगाँठ मनाउने तयारी गर्दैछ । ७ दशक पूरा भएकोमा यो वर्षको वार्षिक दिवसको महत्व विशेष रहने देखिन्छ । दुईवटा विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएको चीन तेस्रो विश्वको मुलुकबाट माथि उठेको छ र उदीयमान शक्तिका रूपमा देखा परेको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र मजबुल भएको छ र विश्वव्यापी आर्थिक अर्डरको स्थानका रूपमा आशाको केन्द्र बनेको छ । उसले बहुध्रुवीय विश्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ । यो मुलुकले बाह्य प्रभावबिना सम्प्रभु अधिकारको कसरत गर्न थालेको छ र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनका लागि नयाँ संस्थाहरू ल्याउन थालेको छ ।
गयो गोरखकाली !
संघ र प्रदेश सरकारको करिब–करिब बीच बिन्दुमा रहेको एक उद्योग बन्द छ । ६ सय ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको, मस्र्याङ्दी र दरौंदी नदीको संगममा उद्योगको विशाल भवन र मेसनरी सामानहरू छन् । कर्मचारीको कार्यालय, आवास र मैदान छ । तर, उद्योगको जीवन छैन अहिले । उद्योगको जीवन नै नभएपछि अरू भौतिक सम्पत्ति के छ भन्नु र खै ? ठाउँठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्न, डीपीआर, ईआईए, आईईईए गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेट राखिएको छ ।
भण्डारणमा लाग्ने शत्रुजीवविरुद्ध स्थानीय प्रविधिहरू
बालीनाली स्याहार्नुपूर्व र पश्चात् नानाथरीका रोगकीराले क्षति पु-याउँछन् । बाली स्याहारिसकेपछि चिस्यान तथा सापेक्षिक आद्र्रताका कारण बढी मात्रामा ढुसीजन्य रोगहरू लाग्नुका साथै खपटे, पुतली तथा सुलसुलेजन्य कीराहरूले सरदर २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म क्षति गरेको पाईन्छ । यिनको रोकथामका लागि विभिन्न प्रकारका रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ, जुन उपयोगका लागि तयारी खाद्यान्नमा अत्यधिक हानिकारक मानिन्छ । यिनको विकल्पका लागि कृषकहरू तड्पिइरहेको पाइन्छ । रासायनिक विधिमात्र अचूक उपाय हुन् भन्ने मान्यताले पनि गहिरो झ्याड हाल्नुले वैकल्पिक विधि पछि पर्न गएको कुरा पनि नकार्न मिल्दैन ।
नेपालमा देखिएका हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी भएको छ । देशमा भएको विभिन्न कालखण्डको राजनीतिक चरित्र हेर्दा सोझा निमुखा, बेसहारा, सर्वसाधारणलाई बलीको बोका बनाएको देखिन्छ । धर्मपरायण देश भएपनि अहिले यहाँ हिन्दू धर्मको महत्व खस्किदै छ । केहिको मत छ, राजनीतिमा धर्म ल्याउनु आवश्यक छ । किनकि हिन्दू संस्कृतिमा हुर्केका हरेक नेपालीले हिन्दु राजनीति चाहन्छन् । हिन्दू धर्म, संस्कृतिका कुरिती, कुसंस्कारलाई पन्छाएर असल सर्वव्यापी संस्कारको विकास गर्नुको साथै संरक्षण गर्नु हरेक नेपालीको दायित्व हो भन्ने उनीहरको तर्क छ । हिन्दू पहिचानले देशको साझा पहिचान पनि दिन्छ ।
हाम्रो पर्यटन विकासको आधार प्रकृति र संस्कृति
मानिस पर्यटकको रूपमा ज्ञान, अध्ययन, अनुसन्धान, मनोरञ्जन आदिका लागि संसारका विभिन्न ठाउँमा पुगिराखेका हुन्छन् । सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रचुर विकास र विस्तार भएको आजको युगमा ज्ञानको दायरा पनि फराकिलो हुँदै जानु स्वाभाविकै हो । आफ्नो देशमा लुकेका भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका दुर्लभ तथ्य उजागर गरी कीर्तिमान कायम राख्ने होड नै चलेको छ । विविधताले भरिपूर्ण हाम्रा प्राकृतिक सांस्कृतिक र धार्मिक संरचना पर्यटकीय गतिविधिका लागि लोभ लाग्दा छन् ।
कम्पनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो अवस्था बताउने र लगानीकर्ताहरूले लगानी निर्णयका लागि सूचना प्राप्त गर्ने मूल आधार नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले सूचीकृत कम्पनीले प्रकाशित जानकारी तथा विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण भएको र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू नलुकाइएको अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको उदघोषणसहित गत वर्ष र यस वर्षको सोही अवधिको तुलनात्मक विवरण, त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू जस्तै, प्रतिसेयर आम्दानी (ईपिएस), मूल्य–आम्दानी अनुपात (पीई), प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातउल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालका आर्थिक समृद्धिको महŒवपूर्ण आधार पर्यटन व्यवसाय हो । यो व्यवसायमा संलग्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यवसायीहरूले हरेक पर्यटकको आगमनबाट लाभ प्राप्त गरेका हुन्छन् । पर्यटन व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने भनेको होटल, ट्राभल तथा टुर, ट्रेकिङ सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफंैले ल्याएको नेपाल विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाविपरीत विद्युत् विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा तयार गरेर २४ भदौमा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नियमन आयोगको अधिकार कटौती गर्दै मस्यौदा ल्याएको हो । मस्यौदालाई निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रबन्धकहरूले समेत ‘निरंकुश’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले नेपालको विद्युत्को माग पूरा गर्न धेरै मद्दत गरेका छन् ।